Luthini uluvo lweXabiso lakho? | Martech Zone
Luthini uluvo lweXabiso lakho?
NgoLwesibini, Oktobha 18, 2011 Lwesine, Okthobha 27, 2011 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha ndicinga ukuba ndiyamantongomane ukuqala ishishini lam kwiminyaka emi-2 eyadlulayo (kodwa andizukuba nayo nayiphi na enye indlela). Kungekudala emva kokuqala ishishini ndandisazi ukuba ndisengxakini kuba ndandinemveliso entle kodwa ndingenalo nofifi lokuba ndiyithengisa njani. Ndiza kuseta ikowuti ngokuqikelela ukuba kungathatha ixesha elingakanani ndiyiphindaphinde ngereyithi yam yeyure. Isiphumo kukuba izinto zaziza kundithatha amaxesha ama-4 ubude kwaye ndandisenza ngaphantsi kunoko bendiya kuba nako kwizitampu zokutya… kwaye ndingalali.
Kwakungekho ndade ndadibana Matt Nettleton kwaye wafumana uqeqesho lokuthengisa Ndisibonile isiphoso seendlela zam. I yayigqiba ixabiso lenkonzo yam, njengoko kubonisiwe ngoqikelelo lwam, endaweni yokuvumela umthengi wam ukuba axabise inkonzo. Ndingasebenza kwiindawo ezimbini ezahlukeneyo zabaxhasi kwaye ndijike iinzame zabo zokuthengisa ezingenayo, kwaye enye ingenza amakhulu eedola enye kwaye enye ingenza amakhulu amawaka eedola. Umsebenzi ofanayo… amaxabiso amabini ahlukeneyo.
Olo tshintsho kwindlela endenza ngayo ishishini lonyusa ishishini lam. Ndisenabathengi abaninzi abancinci, kodwa oko kugutyungelwe ngabathengi abakhulu xabisa inkonzo yam ngakumbi ngenxa yefuthe elisezantsi kumbutho wabo. Isimanga kukuba ukubandakanyeka okuncinci esinako ngoku yeyona nto inzima kuba ukonyuka nge-10% kwimbuyekezo isenokungagubungeli ukubandakanyeka kwethu kwenyanga!
Umntu othile wandibuza ngenye imini ukuba ndicinga ukuba licebo elihle elo ukuthengisa ngokuvulekileyo amaxabiso eenkonzo kwindawo yabo. Bacinga ukuba luphawu olukhulu lokungafihli kwaye baya kubangela ukuthembakala ngamathemba abo. Nditsho ukuba ayenzi. Ndikubhalele kwakhona ukuba xa upapasha ixabiso lakho, Ixabiso ngoku liyimpawu ukuba lonke ukhuphiswano lwakho luya kukhuphisana nawe ku. Ingxaki xa upapasha ixabiso lakho iyafana nam kunye neekowuti zam zakuqala. Ayithathi ingqalelo ixabiso lenkonzo yakho kwithemba.
Ukuba kunjalo Uyilo ezingama-99, Iyasebenza. Ukhuphisana kuphela nezinye iinkonzo zexabiso eliphantsi. Kodwa kuya kuba sisidenge kwabanye babahlobo bam bokuyila imizobo ukuba bacaphule kwiindleko zelogo ngaphandle kokuqonda ixabiso elinokuza nelogo kwinkampani. Iimpawu ezintsha ziye ichazwe iinkampani! I-logo enexabiso eliphantsi inokubonwa njengexabiso eliphantsi- kunye nenkampani ebimeleyo. I-logo esemgangathweni inokutshintsha loo mbono kunye nokugcina ngakumbi ingqalelo kumzi-mveliso.
Intengiso yakho ngumboniso wangaphandle wokuqonda nina uphawu lwakho. Ukuba inxenye yexabiso lixabiso, ngazo zonke iindlela, yongeza "ngexabiso eliphantsi" kwigama lophawu kwaye uphonsa amaxabiso athile okhuphiswano phaya phezulu! Nangona kunjalo, ukuba ixabiso olizisayo ngamava, ubukrelekrele, umbono, ubuchwephesha, kunye neziphumo… gcina amaxabiso esizeni kwaye vumela ithemba lakho ligqibe ngexabiso uzisa. Xa sisayina umthengi ngamaxesha ali-10 ubungakanani besivumelwano somnye umthengi, asiyilinganisi ngokusebenza amatyeli alishumi nzima. Siyilinganisela ngokuzama ukufezekisa amaxesha ali-10 eziphumo, okanye ukufumana iziphumo ezifanayo kwisinye kwishumi ngexesha.
Lumka kwindlela yakho yokuthengisa kunye nentengiso xa isiza Ixabiso xa kuthelekiswa nexabiso. Abafani! Ixabiso lixabisa malini, ixabiso lixabiseke kangakanani kumthengi. Intengiso yakho kufuneka inyuse ixabiso olizisayo, hayi ixabiso. Kwaye ukuba iqela lakho lokuthengisa liyakhalaza kuwe ukuba liyaphulukana nentengiso ngokusekwe kumaxabiso akho, fumana abathengisi abatsha. Kuthetha ukuba abayiqondi kwaye abayincedi ithemba ukuba liqonde ixabiso oza nalo.
ISidenote: Ngeli xesha lobunzima, ndingongeza ukuba inkqubo yethu yengqesho inale ngxaki inye. Abantu bahlala belindele ukunyuswa ngokusekwe kubo umgudu womsebenzi, umgangatho wokuphila, okanye utshintsho kwiindleko zokuphila. Lixabiso labo eliqondwayo ngokwabo. Akukho nanye kwezo zinto ibalulekileyo kwinkampani. Ngokusekwe kwezi, abanye bazibaxa ixabiso labo… kwaye uninzi banokulujongela phantsi. Kuwo wonke umsebenzi wam (ngaphandle komkhosi wamanzi), ndinyanisile ze yafunyanwa yonyuselo. Kungenxa yokuba endaweni yokuthetha I-COLA okanye imigangatho yemizi-mveliso, Ndithethile iziphumo kunye neenzuzo. Yayingeyonjongo yenkampani ukuba indinike i-20% yokuphakamisa xa ndibasindisa okanye ndibenza kabini loo mali.
Iintlungu ezifanayo zokuthengisa nge-imeyile… Kwiminyaka eli-10 kamva.
Ngaba ubhalela umyalezo kwigumbi lokuhlambela?
Okt 19, 2011 ngexesha 11:12 AM
Andinakuvuma ngakumbi. Kunyaka onesiqingatha odlulileyo ndafumana iincwadi zika-Alan Weiss ezandenza ndaziqonda zonke iimpazamo endizenzayo xa kusenziwa amaxabiso ngeenkonzo zam. Njengoko esitsho ngokufanelekileyo: "Oyena nobangela weefizi zokubonisana eziphantsi kukuzithemba okuphantsi". Kwiinkonzo, kwenza * kungabinangqondo kwaphela * ukuthengisa ixesha, ngokungathi ixabiso esilizisa kumthengi lihambelana nexesha elichithwe. Ukuba umthengi ulinganisa ngokucacileyo ixabiso kunye nexabiso elifunyenweyo, konke kulungile kubo bonke abantu. Akukho mntu uhlaselwa. Yongeza koku ukuba ihlala ithanda ukwenza indlela yokuzibandakanya ubudlelwane obunemveliso ngakumbi, kuba omabini amaqela onwabile.
Ubuntu buqu, ndikhetha ukulawula kude ukuba ewe kumthengi kunokuba uthi Hayi…
Oktobha 19, 2011 ngo-12: 56 PM
Ingcebiso eqinileyo, Jacques!
Oktobha 24, 2011 ngo-5: 23 PM
Kuyinyani-amanqaku akho ahambelana nam njengoko ndifunda izifundo ezifanayo owazenzayo, kwaye ngendlela efanayo. Ayisiyonto imbi ukuba ukulandela ekhondweni lakho kundibeka kwinqanaba elifanayo nawe kwiminyaka embalwa esezantsi kwendlela! Enkosi ngenqaku elinengqiqo.